Fametahana volotsangana, firakotra rindrina volotsangana, gorodona vita amin'ny volotsangana - volotsangana volamena
Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2011 ary mahatratra 133 400 metatra toradroa ny velarany. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny tanànan'i Nanjing, tanàna Zhangzhou, faritanin'i Fujian izay toerana tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny volotsangana. Orinasa vaovaon'ny asa vaventy sy orinasa mpanao asa vaventy miaraka amina iraka "mampiroborobo ny fizotry ny fiarovana ny tontolo iainana manerantany ary mampihena ny fanjifana ny harena voajanahary".
Ny ekipanay dia misy manampahaizana 10 manolo-tena amin'ny fanatambatra amin'ny fikarohana volotsangana, mpamorona endrika 11 ambony, teknisiana 26. REBO no marika, natao manokana amin'ny fanaparitahana ny kolontsaina volotsangana nentim-paharazana sy ny famolavolana endrika vaovao. Amin'ny maha mpamatsy volavola volotsangana any ivelany azy, ny tsena any ivelany dia manarona an'i Etazonia, EU, Mideast, Aostralia, Azia, Amerika atsimo, sns.
Ny rindrin'ny rindrina vita amin'ny volotsangana matanjaka sy mahitsy ...
Volotsangana maharitra maharitra amin'ny tontolo iainana ...
Fampidirana mora kofehy vita amin'ny volotsangana any ivelany ...
Faharetana avo lenta mahatohitra volotsangana any ivelany ...
Volom-borona tsindry hafanana voatenona
Flooring any ivelany any anaty volotsangana misy kapoaka sy mahery
Ny tabilao vita amin'ny volotsangana dia manana toetra maro: matanjaka, mafy, avo hakitroka, avo lenta, maharitra, sns. Ireo toetra toy izany dia mahatonga ny fitaovana ho malaza be eran'izao tontolo izao. Ny tena zava-dehibe dia fitaovana ara-tontolo iainana izy io izay mampihena ny fanapahana hazo be dia be, satria ny volotsangana dia misy fotoana mitombo haingana ary afaka mamerina ny tenany aorian'ny fanapahana azy, na izany aza, ny hazo dia manana fotoana lava mitombo lava (25 taona mahery), manapaka mihombo hanimba ny ala sy ny tontolo iainana ny hazo. Izany no mahatonga ny akora volotsangana ampiasaina be amin'ny sehatra maro ankehitriny.
Fanapahan-toerana maharitra maharitra maharitra
Ny bambu dia manana tombony sy endrika maro ara-toekarena sy ekolojika. Ny volotsangana no zavamaniry maniry haingana eto an-tany. Tena sariaka amin'ny tontolo iainana izy io ary mampihena be ny fanapahana hazo. REBO board decking volotsangana dia vita amin'ny kofehin'ny volotsangana voafintina ary tsaboina amin'ny alàlan'ny hafanana avo, carbonization lalina ary teknolojia manindry mafana, izay mahatonga ny tabilao ho mateza, mahitsy, mafy ary matanjaka. Ny REBO decking volotsangana dia asongadina faritra mahatohitra slip (R10), izay mety indrindra ho an'ny ankizy sy ny biby fiompy ary ny hafa.
Torohevitra fanadiovana volotsangana - torohevitra momba ny fanadiovana sy fikojakojana
Ny bararata dia karazan'ahitra matanjaka izay mety indrindra amin'ny fanaovana terrasetra mafy sy hazo fisaka. Ny tokotanin'ny volotsangana dia mahatonga ny zaridainao hanana endrika voajanahary sy tsara tarehy. Ny gorodona volotsangana mavesatra any ivelany dia mampiasa fitaovana vita amin'ny volotsangana tsara indrindra, ary vita amin'ny alàlan'ny teknolojia fanodinana strik ...
Ny gorodona volotsangana mavesatra dia antsoina koa hoe gorodona vita amin'ny landy. Izy io dia vita amin'ny kofehin'ny volotsangana avo lenta ary noteren'ny teknolojia avo lenta an'arivony taonina. Ny fisafidianana an'io karazan-kazo volotsangana io dia voadio kokoa noho ny an'ny volotsangana mahazatra. Izy io ...